1. 'Bitcoin', imali yedijithali yezwe elisha Uhlobo luni lokutshala imali oluzothola inzuzo enkulu! Uma amashumi eminyaka edlule Othile ukutshela ukuthi kuzoba nemali ezimele kunoma iyiphi i-ejensi kahulumeni. Kepha kuzodume ngokusetshenziswa yonke indawo Yikuphi okunezimali zokukhokha eziphansi kunalezo ezikhokhwa ebhange Ubezohleka ungakholwa. Kodwa namuhla kufakazelwa ukuthi ungathenga noma yini. Kubuye kube nomvuzo omangalisayo ngohlobo lwemali olwaziwa njenge-'Bitcoin '. I-Bitcoin Iyini i-Bitcoin? Yenziwe ngamakhompyutha. Okuyimali engaphatheki Akunasimo kithi esingasibona njengamaphepha emali noma izinhlamvu zemali. Kuyinto uhlelo non-eyodwa. Akekho umnikazi oyedwa. Kepha ingasetshenziswa esikhundleni semali ukuthenga ku-inthanethi ngohlelo lokukhokha kontanga. Futhi wabiza le mali "I-Cryptocurrency"
2. Ukuze ube nemali, kufanele ube nesikhwama semali, leyo yimali Uma ufuna ukuba nemali, uzodinga ukuthola isikhwama semali esihle, esizoba nomsebenzi ofana ne-akhawunti yasebhange. Sigcina ama-bitcoins ngaphambi kokuwasebenzisa. Kunamapulatifomu ahlukahlukene kakhulu wezikhwama zemali - Isikhwama seCoinbase yisikhwama semali okulula ukusisebenzisa esikrinini se-smartphone. Izosekela i-iOS ne-Androind ngokubopha i-akhawunti yasebhange. Futhi, insizakalo yokushintshaniswa kweBitcoin iphuma ibe yimali yangempela futhi inikeza umshuwalense wemali - I-Mycelium uhlelo lokusebenza lwesikhwama oluthandwa kakhulu kuma-smartphones. Ingasekela ubuchwepheshe obusha obufana ne-Trezor, Tor kanye ne-Bitcoin hardware hardware futhi.- I-Electrum Lesi sikhwama semali uhlelo olusetshenziswa kukhompyutha. Iza nohlelo lokubethela kokuphepha okuhle kakhulu. Ukugcina ama-bitcoins amaningi kahle
3. Ungayithola kanjani iBitcoin
4. I-Wire mahhala yabaqalayo Ayikho imali eningi, ekwazi ukuthola i-bitcoin yamahhala kusuka kuwebhusayithi ethembekile yokunikezwa. Okufanele kuhlolwe ngokucophelela Ngoba iningi labo lizokhohlisana Iwebhu empeleni esatshalaliswa ifana ne- https://freebitco.in Okungangena nokufaka isicelo bese uthola ikheli lethu le-bitcoin kusuka kunoma iyiphi iwebhusayithi ekuZipmex.co.th, Bitkub.com, Satang.pro noma eHuobi.co.th ukugcwalisa nokugcina i-bitcoin njalo ngehora, ifinyelela inani eliphansi. nini Singadlulisela esikhwameni sethu semali
5. Ukuhweba ngomugqa, lapho sizothenga khona i-bitcoin kusuka ku-baht, siyenza eThailand, iwebhusayithi yabo, iZipmex.co.th, Bitkub.com, Satang.pro noma iHuobi.co.th izosivumela ukuthi sifake isicelo sokuqinisekiswa kobunikazi, sidlulisele i-baht ku Akhawunti futhi uthenge i-bitcoin kumthengisi ukuze abe ngowethu. Kuya ngokuthi uthanda ukubamba imali iminyaka eminingana, noma ungathengisa iBitcoin futhi uhwebe nge-baht futhi, kepha kukhona nengozi. Ngoba imakethe ye-crypto ivulekile ngaso sonke isikhathi.
6. Okuyingqayizivele nokujabulisayo kweBitcoin ukuthi kungagaywa njengegolide kufomu ledijithali. Ngoba yakhelwe ukuba nesamba esingu-21 million, akunakubakhona okungaphezulu. Ngakho-ke kufanele sisebenzise amasu wezimayini. Ingabe ukumba ngemishini yehadiwe Yikuphi le excavator engathengwa online Vele usethe, uyixhume, ukhokhe isikweletu sakho bese usishiya. Kuzoqhubeka nokumba izinhlamvu zemali zedijithali kithi.
7. Indlela ngayinye yokutshala imali ku-Bitcoin yehlukile. Kungenzeka angakwazi ukwahlulela ukuthi yikuphi okuhle kakhulu Kepha kubalulekile ukuthi ufunde njalo imininingwane nemikhuba yamabhangqa emali. Ukusiza ukwenza inkontileka yenzuzo kahle ngesikhathi esilinganiselwe. Futhi uthole imiphumela emihle kakhulu kuwe